May Nyane: မိုင်တိုင်အမှတ် ၄၃...
မွေးနေ့ဆိုလို့...အင်း....မွေးနေ့ဆိုတဲ့ ရက်စွဲက လူတစ်ယောက်ကို အရာရာ ပြန်ပြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ် သတိရစေဖို့ သတ်မှတ်ပေးထားသလိုပါပဲလေ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်၊ နာမည်တွေ မှတ်ရတာ အားနည်းတော့ ဘဝအတွက် အမှတ်တရတွေက ရက်စွဲတွေ အနေနဲ့ မရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်လူမိုက်ကတော့ အသက်ကြီးလာပေမယ့် မျဉ်းဖြောင့်ဘဝကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘဝပေါင်းမြောက်မြားစွာနဲ့ အတူတကွ နေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေလေရဲ့။ စိတ်နှလုံးအိမ်ကို သံကွန်ချာ အထပ်ထပ်အုပ်ထားရင်တော့ အသက် ၉၀-ထိများ နေရမလား မသိဘူး။
ဆရာမအတွက် ပျော်ရွှင်သောမွေးနေဖြစ်ပါစေလို့ နဲ့ တချိန်တည်းမှာဘဲ မင်္ဂလာသတင်း၊ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ဘွယ် သတင်းများ၊ မြင်ကွင်းများကိုသာ ကြားရမြင်ရတဲ့ ကာလကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိပါလို့ (ကျနော်တို့အားလုံးအတွက်ပါ) ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ငါးရက်နေရင် အန်တီစု မွေးနေ့ကျတယ်။ စင်ကာပူဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မြန်မာတွေ စုပြီး မွေးနေ့အလှူလုပ်ကြမယ်။ အန်တီ့ဓါတ်ပုံပြပွဲ၊ ကဗျာရွတ်ပွဲနဲ့ လူတွေ အမှတ်တရ စကားပြောကြလိမ့်မယ်။ အန်တီ့အတွက် ပေးဘို့ လူတွေ နှစ်စဉ် အမှတ်တရ ရေးထိုးလာတဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာလွှာ မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေလည်း ၆၀ ပြည့်ကစလို့ တစတစ များလာနေပြီ။ အန်တီ အမြန်ဆုံးလွတ်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းကြရမှာပေါ့။
"Happy 43th Birth Day Ah Ma"
May all your dreams come true along with the Democratic Union of Myanmar (Burma) soon..
မျက်နှာချင်းဆိုင်အနီး ဖြစ်လာတဲ့ ဂဏန်းနှစ်လုံးဟာ အတွင်းသဏ္ဍာန်ကို အာရုံကပ် ပြန်သုံးသပ်ဖို့အတွက် အချိန်ကိုရောက်လာကြောင်း သင်္ကေတပြထားတာများလား။ ကိုယ်တိုင်လည်း တနေ့ရောက်ရဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျောချင်းကပ်အဝေးမှာပဲ။
လူသားဆန်ဆန် စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အစ်မ ဘ၀မှာ လိုချင်တာ လိုအပ်တာများ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာ ပန်းတိုင်တခုကို ချစ်သူတို့နဲ့အတူ ရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(လက်ဆောင် ဘာလိုချင်လဲ ပြော။)
ခိုင်မာသော ယုံကြည်မှု ၊ ရင်တွင်းမှဖြစ်လာသော ခံစားမှု ၊ ဘ၀အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာနဲ့ မေတ္တာစေတနာ အပြည့်ထားတတ်သော ဆရာမ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုပေါင်းများစွာနဲ့ လိုချင်သော ဘ၀ပန်းတိုင်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမ။ တခြားတော့ ထူးထူးထွေထွေ မဆုတောင်းတော့ဘူး၊ ဒီနေ့ မွေးနေ့မှသည် နောက်နောင် အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဖြစ်နေတာ တထပ်တည်း ကျနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အဲလောက်ကြီးလည်း..သံဝေ ဂ တွေ ..ယူ မစော နဲ့အုံးလေ။
တကယ့်ဘ၀ ကြီး ထဲ မှာ.. ပြည့်ဝ စွာ.. ရှင်သန် ရင် ဆိုင် ရ မဲ့.. ၃ နှစ် သမီး လေး ပဲ ရှိ ပါ သေးတယ်။
ဘာ မှ မကြောင့်ကြ နဲ့..ရှေ့ ဆက် လျှောက်မယ်... လမ်း ရှိသရွေ့.. နေ သာ သရွေ့.. လေညာ ကို ဆန် လို လည်း ဆန်..
မိသားစု နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀ ညီမျှ လှပ နိုင် ပါစေ။
Tin Moe Aye said...
I have no idea its already 43. All my memories of University's life is vague sometime. Well.. Time flies so fast.
see you in near future.
Your birthday is June 14 that is World Blood Donor Day also. Wow... so great.
မွေးနေ့ လာလည်သူတွေကို ဘာမှမကျွေးရတာ စိတ်မကောင်းပါ..။
တချိန်ချိန် .... အသေအချာ ဆုံကြမယ်။
Khin Ma Ma Myo said...
Happy Birthday, Sayarma Daw May Nyein. May all wishes come true!
အန်တီ... မွေးနေ့ကတ်တွေ ပို့ထားတာ ရလား... :D
လှပပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ချစ်တဲ့ မိသားစုကလေးနဲ့အတူတူ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
နောက်ကျ လာပြီး ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေချင်စိတ်တွေရှိပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
Aunty may nyane! Happy belated BD..
"မ" ရေ…၃ရက်နောက်ကျသွားတယ်...ပျော်ရွှင်စရာစစ်စစ်တွေနဲ့ 
မွေးနေ့ အသစ်သစ်တွေရပါစေလို့ …ဘ၀ဆိုတာ တခါတခါ မျက်လှည့်လ်ို အံသြရင်ခုန်စရာမို့မနက်ဖြန်တွေ မလှတော့ဘူးလို့ဘယ်သူကတတ်အပ်ပြောနိုင်မလဲ "မ"ရယ်…ချစ်စရာမိသားစုလေးနဲ့ဇာတာထဲကလို "အသက်၁၂၀ရှည်စေသော်ဝ်"….
Ma may nyein
အမရေ ထပ်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် .. ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့ သားသမီးတွေကြား အပြုံးတွေ ဝေဆာလို့ အမြဲ နေနိုင်ပါစေလို့း)
တခု ပြောဖို့ မေ့သွားတယ် .. ကိုယ့်အမမို့ ပြောတာမဟုတ် .. ၄၃ လို့ ထင်ကို မထင်ရတား)
အစ်မရေ။ belated happy birthday ပါနော်။ ဖိုးစနေ အလုပ်တွေရှုပ် အရှုပ်တွေလုပ်နေလို့ မွေးနေ့မမှီလိုက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ နောက်မကျသေးပါဘူး ။
၁၃ ၊ ၂၃ ၊ ၃၃ မှာတုန်းက မရခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းပျော်၇ွှင်မှုတွေရှိခဲ့ရင် ခု ၄၃ မှသည် ......